नेपालमा भूमिगत यौन सम्पर्क गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छन् ? हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपालमा भूमिगत यौन सम्पर्क गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छन् ? हेर्नुहोस
फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गर्योआ भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम देहसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ। यौनकर्मीहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो।पूर्वका प्रमुख शहर र बजारमा सर्वत्र स्थापना भइरहेका छन्, सेक्स स्टेसनहरू। यस्ता स्टेसनका पारखी
छन्,रिक्साचालकदेखि ठूला व्यापारीसम्म। पूर्वको यौन व्यवसायको ताजा हाल बुझ्न गोपाल दाहालले पूर्वका थुप्रै यौन अखडा चहारेका छन्।भारत र पूर्वी नेपालको नाका हो, झापाको काकडभिट्टा।भारतको सिलिगुढी हुँदै दार्जीलिङ, सिक्किम जाने र सीमाबाट नेपालतर्फ आउने गाडी स्टेसन छ, त्यहाँ। तर पछिल्ला दिनमा त्यो गाडी स्टेसन भन्दा बढी ‘सेक्स स्टेसन’ का रूपमा परिचित छ। नेपाल र भारतका मात्र होइनन्, बंगलादेशका नागरिकसमेत जमघट हुने यो ठाउँमा खुल्लमखुल्ला यौनधन्दा चल्ने गर्छ।
सिरहाको लहान बजारस्थित हस्पिटल चोक अर्को सेक्स स्टेसन हो। यहाँका न्यू राज होटल, ब्लुस्टार, आशिकी होटल एन्ड लजमा धन्दा चल्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। लहानमा पनि प्रहरीले छापा मारेर दर्जनौँलाई पक्राउ गरिसकेको छ। सर्लाहीका मलंगवा, नवलपुर, लालबन्दीलगायत साना बजारमा पनि थुप्रै सेक्स स्टेसन छन्। यहाँ खुलेका रेस्टुरेन्ट तथा लजहरूका अधिकांश ग्राहक गाडी चालक हुन्। स्थानीय व्यापारी र केही बाहिरबाट आउनेहरू पनि हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। जनकपुरको जनकचोकलाई त स्थानीयवासी ‘रेडलाइट एरिया’ भन्ने गर्छन्। उनीहरूका अनुसार यहाँका धेरैजसो लज यौनधन्दाकै लागि खोलिएका छन्। ढल्केबर, लालगढ, बर्दिवास, चन्द्रनिगाहपुर हुँदै पथलैयासम्ममा गाडी चालकहरूलाई खाना, बस्नसँगै यौन सेवा दिने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसपछि पुगिने हेटौँडालाई त गाडीको लोड बिसाउनेमात्र होइन, यौन तिर्खा मेटाउने शीतल चौतारी भने पनि हुन्छ।
हेटौँडामा काठमाडाँैदेखिका यौनकर्मीहरूको समेत जमघट हुन्छ। तीन सयको हाराहारीमा यौनकर्मी रहेको अनुमान गरिएको हेटौँडामा प्रहरी र एनजीओ आईएनजीओले यौनकर्मीको निगरानी गरिरहेका छन्। चितवनलाई पूर्व र पश्चिम सबैतिरको केन्द्रीय सेक्स स्टेसन भने पनि हुन्छ। चितवनका रत्ननगर, नारायणगढदेखि मौवाखोलासम्म साना–ठूला सेक्स स्टेसन सञ्चालित छन्। पुलिस–व्यवसायी जुहारी देशका मुख्य बजार र बसपार्क क्षेत्रमा सेक्स स्टेसन सञ्चालन हुन्छन् भन्ने जानकारी प्रहरीलाईभन्दा बढी अरू कसलाई होला? कुनै शहरमा नयाँ प्रहरी प्रमुख आउनेबित्तिकै उसको पहिलो काम त्यस क्षेत्रका यौनक्रियाकलाप गर्ने होटलमा छापा मार्ने र मान्छे पक्राउ गर्ने हुन्छ। झापा, दमकका डीएसपी रविकुमार पौडेलले जस्तै सबैतिरका प्रहरी प्रमुखले यसलाई काम देखाउने अवसरका रूपमा लिएका हुन्छन्। दमकका होटलमा छापा मारेर पक्राउ गरेपछि होटल व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। धेरै ठाउँमा त प्रहरीविरुद्ध होटल व्यवसायीले आन्दोलनै गरेका छन्। प्रहरी र होटल व्यवसायीको यस्तो जुहारी छ महिनाजति चल्छ। ‘त्यसपछि कतै नियन्त्रण पनि हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘कतै प्रहरीको ‘लाइन’ मिल्छ अनि बन्द हुन्छ, छापा मार्ने काम।’
दुःखद चितवन बम बिस्फोट गराएका यिनै रहेछन् ६ जना, हेर्नुहाेस्
सरकारले विप्लव समुहलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि रेखा थापाले लेखिन् सबैलाई चकित बनाउने यस्तो स्टाटस, स्टाटस बन्यो भाईरल
८९ वर्षको उमेरमा पनि श्रीमानको यस्तो चाहनाले वृद्ध वृद्धाबीच बबाल, लाजै नमानी युट्युवभरी खोले मनका साँचेका गुनासा(भिडियो हेर्नुस्)
१६५ जना बोकेर उडिरहेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा मस्त निदाईरहेका पाइलट